जनता जगाउने किताबको अनुवाद ⋆ JINDAGANI.COM
Home » जनता जगाउने किताबको अनुवाद
असार १९, २०७८	1	By शकुन्तला जोशी
राजनीतिक दल र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रतिबन्ध लगाएर निर्बन्ध अघि बढ्ने सोचबाट निर्देशित पञ्चायतले दशक पार गरेको थियो ।
यस अवधिमा जनतामा भने स्वतन्त्रता र परिवर्तनको भोक भुसको आगोझैं सल्किन थालेको थियो । क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति अनुकूल बनिरहेको विष्लेषण गरिरहेका थिए कम्युनिष्टहरू ।
भलै, विभिन्न धार–समूहमा विभाजित थिए, तापनि क्रान्तिको सपना सबैले देखिरहेका थिए । क्रान्तिसम्बन्धि किताबहरू पाठ्यक्रम बनाएरै कार्यकर्ता र जनतालाई पढाउन सक्रिय थिए ।
किताब–पत्रपत्रिका पाउने स्थान सीमित थिए । त्यसैमध्येको एउटा थियो– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य निरञ्जन गोविन्द वैद्यको भोटाहिटीस्थित प्रगति पुस्तक भण्डार ।
पेइचीन रिभ्युदेखि युवाहरूको गीतसम्म, गोर्कीको बहुचर्चित उपन्यास ‘आमा’देखि रादुगा प्रकाशन, मस्कोबाट आउने विभिन्न किताब उनको पसलमा पाइन्थे । कतिपय किताब खुलेर पढ्न वा खरिद गर्न पाइने, कतिपय लुकिछिपीमात्रै ।
‘उपन्यास पढिसक्दा एउटा सिंगै क्रान्ति भोगेजस्तो, देखेजस्तो बोध भयो । गज्जब आनन्द र उर्जा मिल्यो’, उनी सम्झन्छन्, ‘चिनियाँ क्रान्तिको एक कालखण्डलाई आख्यानीकरण गरिएको दस्तावेज नै थियो त्यो ।’
विदेशी किताब प्रायः हिन्दी वा अंग्रेजी भाषामा आउँथे । त्यही माचोमा आइपुगेको थियो लि शिन–तियन लिखित लघु आकारको उपन्यास– ब्राइट रेड स्टार ।
चाइनिज भाषामा लेखिएको उक्त उपन्यासले सन् १९७४ मा अंग्रेजी भाषामा अनुवाद भएपछि विश्व–यात्रा सुरु गरेको थियो ।
अंग्रेजी भाषाका किताबको पाठक स्वाभाविक रूपमा कम हुन्थे । त्यही कममध्येमै पर्थे– तत्कालीन नेकपा (चौथो महाधिवेशन)का नेता सीताराम तामाङ्ग ।
उनलाई उछिनेर किताब पढिसकेका युवाहरूबाट चर्चा सुनेपछि उनले पनि बैद्यको पसलबाट ‘रेड ब्राइट स्टार’ उठाए । किताब उनलाई मन पर्यो ।
ब्राइट रेड स्टारको गाता
निर्मल लामाको प्रेरणा
तामाङ २०२२ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनमा सक्रिय थिए, नेकपा (चौम)का शीर्ष नेता निर्मल लामाको निकट पनि । निर्मल लामा–सुकन्या वाइवा दम्पत्ति र साहित्यकार पारिजातको बसाइ म्हेपीमा थियो ।
हाल सुकन्या बस्ने घरभन्दा केही पर ठूलो कुखुरा फार्म भएको स्थानमा घर थियो । निर्मल लामा भने राजनीतिक मुद्दामा जेल परेका थिए, उनी २०२८ सालमा छुटे र घर आए ।
पार्टीसँग जोडिएकाहरू निर्मल लामा र साहित्यकारहरू पारिजात भेट्न उक्त घरमा पुगिरहन्थे ।
तामाङ्ग लामालाई भेट्न त्यहाँ पुगेका बेला ‘ब्राइट रेड स्टार’को प्रसंग निस्कियो । सोही सन्दर्भमा लामाले उक्त पुस्तक नेपालीमा अनुवाद गर्न तामाङलाई भने ।
माओत्सेतुङ नेतृत्वको चिनियाँ क्रान्तिमा एउटा बालक कसरी सहभागी हुन्छ भन्ने कथानक रहेको किताब नेपाली क्रान्ति जगाउने बलियो माध्यम हुने ठहर लामाको थियो । तामाङ व्यवसायिक अनुवादक थिएनन् । तर अंग्रेजी भाषामा पकड भएका कारण उनले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास लामालाई भएको हुँदो हो ।
पार्टीको बुद्धिजीवि मोर्चामा आबद्ध तामाङलाई पनि पढिसकेपछि लागेकै थियो, ‘जनतालाई सजिलोगरी क्रान्ति बुझाउन किताब उपयुक्त छ ।’ त्यसैले उनी पनि तयार भए ।
‘उपन्यासको पात्र बालक तुङ च कुनै पार्टीमा आबद्ध त छैन । तर क्रान्तिकारी बा–आमाको सपना आत्मसात् गरेर वर्गशत्रुसँग भिड्ने योद्धा बन्छ । त्यसक्रममा उसको भोगाइ, सिकाइ र उत्सुकता एकदम प्रभावशाली छ ।
भन्छन्, ‘एउटा भाषाका मौलिक कृतिलाई अनुवाद पढेर अर्को भाषामा उतार्नु जटिल थियो । तैपनि आँट गरेँ । पहिलो चरणमा त्यतिबेलाको आवश्यकता पूर्ति गर्न सामान्य भाषामा अनुवाद गरेँ । झण्डै सात महिनामा अनुवाद सकेको थिएँ ।’
र, नेपाली पाठकले आफ्नै भाषामा ‘रेड ब्राइट स्टार’लाई ‘चम्किलो रातो तारा’को रूपमा पढ्न पाए ।
अनुवाद थाल्नुअघि उनले उपन्यास चार पटक पढे । चीनमा माओत्सेतुङले जनक्रान्ति विस्तार गर्न र जापानी दमनबाट जनतालाई बचाउन जनमुक्ति सेना बनाएर सन् १९३४ अक्टोबर १६ देखि १९३५ अक्टोबर २२ सम्म ‘लङमार्च’ गरेका थिए ।
त्यो रणनीतिक मार्चमा कस्ता जनता जोडिएका थिए ? त्यो अभियानले कसरी बालबालिकासम्मलाई क्रान्तिमा लाग्न उत्साहित गरेको थियो ? भन्ने कथाले तामाङलाई तानेको थियो ।
उनी भन्छन्, ‘उपन्यासको पात्र बालक तुङ च कुनै पार्टीमा आबद्ध त छैन । तर क्रान्तिकारी बा–आमाको सपना आत्मसात् गरेर वर्गशत्रुसँग भिड्ने योद्धा बन्छ । त्यसक्रममा उसको भोगाइ, सिकाइ र उत्सुकता एकदम प्रभावशाली छ ।’
चम्किलो रातो तारा किताबको गाता
क्रान्तिको आगोमा उर्जा
त्यसबेला भारतमा चारु मजुमदारको नेतृत्वमा किसान क्रान्ति चर्किरहेको थियो । जसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको थियो । पञ्चायतविरोधी आन्दोलन उठ्न सुरु भएको थियो ।
दल प्रतिबन्धित भएकाले विरोध गर्न निस्कनेमा विद्यार्थीहरू हुन्थे । उनीहरूभित्र सल्किरहेको क्रान्तिको आगोलाई थप उर्जा चाहिएको थियो । अर्थात क्रान्तिकारी पठन सामग्री चाहिएको थियो ।
‘चम्किलो रातो तारा’ त्यसमध्येको एउटा बन्ने विश्वास लामा र तामाङको थियो । त्यसैले किताब जसरी पनि छाप्नु थियो ।
तामाङ भन्छन्, ‘पार्टीसँग पनि आर्थिक स्रोत बलियो थिएन । मलाई ठ्याक्कै सम्झना त छैन तर पार्टीले केही सहयोग गर्यो, मैले ९/१० हजार रूपैयाँ आफैँ खर्च गरेर किताब छापियो ।’
काठमाडौंबाहिर किताब पठाउन गाह्रै थियो । तर साथीहरुले खोजेर– किनेर पढ्न थाले । एकजनाले किनेको किताब धेरैले बाँडेर पनि पढे । नभन्दै किताबले क्रान्तिकारी मुटुहरूलाई उर्जा दिने काम गर्न थाल्यो ।
त्यसबेला उनी कृषि विकास बैंकमा जागिरे थिए र कलेजहरूमा प्राध्यापन पनि गर्थे । त्यसैले त्यति खर्च जुटाउन धेरै गाह्रो परेन । पहिलो संस्करण एक हजार एक सयप्रति छापिएको उनलाई सम्झना छ । तर छापिएको प्रेसको नामचाहिँ उनले भुले ।
‘त्यतिबेला लिथो मेशिनवाला छापाखाना हुन्थे । वामपन्थी आन्दोलनलाई सघाउने केहीको पनि त्यस्ता छापाखाना थिए, जसमा वामपन्थी धारका पत्रिका पनि छापिन्थे । त्यसैमध्ये क्षेत्रपाटीमा रहेको एउटा प्रेसमा आफैं धाएर किताब छापेको थिएँ’, उनले भने ।
किताब छापिएर हात पर्दा उनलाई निकै खुसी लागेको थियो । लगत्तै उनले किताब नेता लामालाई दिए, उनी पनि खुसी भए । प्रकाशकले दिएका केही प्रति किताब उनले फटाफट पार्टीकै साथीहरूलाई बाँडिदिए ।
त्यस कालमा काठमाडौंबाहिर किताब पठाउन गाह्रै थियो । तर साथीहरुले खोजेर– किनेर पढ्न थाले । एकजनाले किनेको किताब धेरैले बाँडेर पनि पढे । नभन्दै किताबले क्रान्तिकारी मुटुहरूलाई उर्जा दिने काम गर्न थाल्यो ।
अनुवादक सीताराम तामाङ्ग
क्रान्तिको ज्वारसँगै किताबको प्रसार बढे पनि उनी किताबको भाषाप्रति भने तामाङलाई असन्तुष्टि थियो । ‘त्यो कामचलाउ भाषामात्रै थियो’, उनी भन्छन्, ‘चिनियाँ भाषाको मोडेलमा अनुवाद गर्नुपर्ने, नेपाली मोडेलमै अनुवाद भएको थियो ।’ पछि उनले चिनियाँ भाषाको मौलिकता दिने गरी उपन्यास अनुवादको सम्पादन पनि गरे ।
त्यसो गर्नुको कारण स्पष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘हामी दुई भाषा बोल्छौं– तिब्बत बर्मेली र भारोपेली । मेरो मातृभाषा पनि तिब्बत बर्मेली भाषिक परिवारमै पर्छ । उदाहरणका लागि, भारोपेली भाषामा काकालाई कान्छाबाउ भनेर सम्बोधन गर्ने चलन हुन्छ भने हाम्रो तिब्बत बर्मेली भाषिक परिवारमा ‘बाउकान्छा’ वा ‘काका कान्छा’ भन्नुपर्ने हुन्छ । बाउको सन्तानमा कान्छो भन्ने अर्थमा त्यसरी भनिन्छ । तर कान्छा पहिले जोडियो भने हाम्रो संस्कृत आधारित भाषामा कुटाइ पो खाइन्छ । अनुवादकले ध्यान दिनुपर्ने विषय रहेछ यो । किताबप्रति भाषिक हिसाबले पनि न्याय गर्नुप-यो भन्ने लागेर मैले बहुदल आएपछि सम्पादन गरेँ ।’
हाल प्रगति पुस्तक सदनको प्रकाशनमा उपलब्ध किताब सोही सम्पादित भाषाको हो ।
उपन्यासकार लि शिन-तियन
‘चम्किलो रातो तारा’ले उनलाई देशैभरका युवामाझ चिनायो । देशका विभिन्न ठाउँमा अनेक जिम्मेवारीले पुग्दा किताबका पाठक प्रशस्तै भेटे । किताबकै कारण सम्मान र प्रेम पाए ।
‘जहाँ पुग्दा पनि तपाईंको किताब पढेँ, त्यही किताब पढेर म आन्दोलनमा जोडएँ भन्ने युवा भेटिन्थे । कतिपय किसानले पनि मलाई यस्तो प्रतिक्रिया दिए । अझ माओवादी जनयुद्धकालमा किताब धेरै नै पढियो । किताबले आन्दोलन बुझ्न जनतालाई मद्दत पुगेको देख्दा खुसी लाग्थ्यो’, उनले भने ।
आज अर्थात् जुलाई ३ तारिख लेखक लि शिन–तियनको दोस्रो स्मृति दिवस हो । अनुवादकको पहिचान निर्माण गरिदिने किताबका लेखकलाई तामाङ सम्मानपूर्वक सम्झन चाहन्छन् । तामाङलाई लाग्छ, ‘लि शिन–तियन सामान्य तरिकाले महान् विषयलाई उठान गर्ने लेखक हुन् ।’
तर उनको किताब जति चर्चित छ, त्यति नै गुमनाम छन् उनी । नेपालमा उनलाई सम्झने कष्ट गरेको देखिँदैन । धेरैलाई त उनको निधन दुई वर्षअघिमात्रै भएको भन्ने पनि थाहा छैन होला ।
‘अहिले त संसदीय व्यवस्थाका नेतृत्वमा पुगेकाहरू विचारको धरातलबाट विचलन भएर राम मन्दिर बनाउने, पशुपतिनाथमा सुनको जलप चढाउने चरणमा पुगे । उनीहरूलाई यस्ता किताबको सम्झना हुन पनि गाह्रो होला ।
चीनमै पनि उनको चर्चा कम हुँदोरहेछ जस्तो लाग्यो तामाङलाई । भन्छन्, ‘एउटा गोष्ठीमा सहभागी हुन सन् १९८० मा चीनको सांघाइ पुगेको थिएँ । अर्कै सन्दर्भमा गएकाले पनि हुनसक्छ, उनीबारे कतै चर्चा सुनिनँ ।’
नेपालमा चर्चा नहुनुलाई चाहिँ स्वाभाविक नै मान्छन् तामाङ । ‘आन्दोलनको बेला यस्तो किताबको खोजी हुने हो बढीजसो । अब नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन नै दिशाहीन भएको बेला, भनौं कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरु पूँजीवादी दिशामा अग्रसर भइसकेको यो सन्दर्भमा उनको सम्झना हुन नसक्नु स्वभाविक हो ।’ उनले भने ।
उनलाई सम्झना छ– त्यो बेलाका चौथो महाधिवेशन, माले, माक्र्सवादी केन्द्रलगायतका पार्टी क्रान्तिकारी धारका थिए र पढिन्थे चम्किलो रातो तारा’का साथै गोर्की, चेखब, लु सुनहरूका किताबहरू । उनी व्यंग्य कस्छन्, ‘अहिले त संसदीय व्यवस्थाका नेतृत्वमा पुगेकाहरू विचारको धरातलबाट विचलन भएर राम मन्दिर बनाउने, पशुपतिनाथमा सुनको जलप चढाउने चरणमा पुगे । उनीहरूलाई यस्ता किताबको सम्झना हुन पनि गाह्रो होला ।’
तर उनी आशावादी छन्, फेरि यस्ता किताबको महत्व बढ्नेबारे । उत्साहित हुँदै भन्छन्, ‘हाम्रो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को पाठ्यक्रममा त अहिले पनि चम्किलो रातो तारा समावेश छ ।’
Tagsचम्किलो रातो तारा लि शिन तियन
मिश्र वैजयन्ती । says:
राम्रो लेख । आल्हादकारी ।